ရသေူမလေး လို ရကေူးကနျ ထဲမှာ အမိုကျစား ရကေူးနတေဲ့ ခြီခြီလေး ရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး – Let Pan Daily
ရသေူမလေး လို ရကေူးကနျ ထဲမှာ အမိုကျစား ရကေူးနတေဲ့ ခြီခြီလေး ရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး
နိုငျ ငံ ကြျော Beauty Blogger တဈ ယောကျ ဖွဈ တဲ့ နခွေညျဦး က တော့ ဘယျ လို အခွအေနေ တှေ ဖွဈပါစေ သူမ ဘဝ ကို သူမ စိတျ ကွိုကျ ဖနျ တီး ယူ နတော ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ပရိသတျ ကွီး လညျး နခွေညျဦး ရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှေ ကို သဘောကြ ကွမယျ ထငျပါ တယျ ။ သူမက လကျရှိမှာလဲ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပျကို ကွိုးစား လုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ … .
နခွေညျဦး က တော့ သူမ ရဲ့ ဘဝကို အရိုးရှငျးဆုံး နဲ့ အကောငျး ဆုံး ဖွတျသနျး နပွေီး လူငယျ တဈယောကျပီပီ လှတျလပျ ပေါ့ပါးစှာ နတေတျ သူ တဈယောကျ ပဲ ဖွဈပါတ ယျ ။ နခွေညျဦး က တကျသဈစ သရုပျဆောငျ တဈယောကျ အဖွဈ အနုပညာ လောကမှာ ကွိုးစား နသေလို သူမရဲ့ Beauty bynaychi ကုမ်ပဏီကွီး ကိုလညျး ဦး ဆောငျ နတေဲ့ ထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီး ငယျလေး တဈယောကျပဲ ဖွဈပါ တယျ … .
မိနျးက လေး တျောတျော မြားမြား က တော့ ကိုယျ့ ဘဝကို စိတျကွိုကျ ဖနျတီးနတေဲ့ နခွေညျဦး ကို အားကမြှုတှေ မြားစှာနဲ့ အားပေး ကွတာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။ အလုပျ ကိစ်စ နဲ့ ဖွဈပါ စေ အပြျောဖွဈစေ ပွညျတှငျး ပွညျပ ခရီးစဉျ တှမြေားစှာ ကို သှားရောကျ လရှေိ့တဲ့ နခွေညျဦး က လကျရှိ ကိုဗဈ ကာလမှာ တော့ ဘယျမှ မသှားရပဲ အိမျတှငျး ပုနျး နတောပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။ ဒီကနေ့ မှာ တော့ နခွေညျဦးက ခရီးတှေ ထှကျတာကို အရမျးလှမျး နတေဲ့ အတှကျ နအေိမျက ရကေူး ကနျကွီးမှာပဲ ဝတျစုံပွညျ့ဝတျ ပွီး သာသာ ယာယာ အနားယူ ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပျ တှကေို အငျစတာဂရမျ စာမကျြနှာ ကနတေဆငျ့ မြှ ဝပေေး ထားတာ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … .
နိုင် ငံ ကျော် Beauty Blogger တစ် ယောက် ဖြစ် တဲ့ နေခြည်ဦး က တော့ ဘယ် လို အခြေအနေ တွေ ဖြစ်ပါစေ သူမ ဘဝ ကို သူမ စိတ် ကြိုက် ဖန် တီး ယူ နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် ကြီး လည်း နေခြည်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို သဘောကျ ကြမယ် ထင်ပါ တယ် ။ သူမက လက်ရှိမှာလဲ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် … .
နေခြည်ဦး က တော့ သူမ ရဲ့ ဘဝကို အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်း ဆုံး ဖြတ်သန်းနေပြီး လူငယ် တစ်ယောက်ပီပီ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ နေတတ် သူ တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတ ယ် ။ နေခြည်ဦး က တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ် အနုပညာ လောကမှာ ကြိုးစား နေသလို သူမရဲ့ Beauty bynaychi ကုမ္ပဏီကြီး ကိုလည်း ဦး ဆောင် နေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်လေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
မိန်းက လေး တော်တော် များများ က တော့ ကိုယ့် ဘဝကို စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနေတဲ့ နေခြည်ဦး ကို အားကျမှုတွေ များစွာနဲ့ အားပေး ကြတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အလုပ် ကိစ္စ နဲ့ ဖြစ်ပါ စေ အပျော်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ် တွေများစွာ ကို သွားရောက် လေ့ရှိတဲ့ နေခြည်ဦး က လက်ရှိ ကိုဗစ် ကာလမှာ တော့ ဘယ်မှ မသွားရပဲ အိမ်တွင်း ပုန်း နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီကနေ့ မှာတော့ နေခြည်ဦးက ခရီးတွေ ထွက်တာကို အရမ်းလွမ်း နေတဲ့ အတွက် နေအိမ်က ရေကူး ကန်ကြီးမှာပဲ ဝတ်စုံပြည့်ဝတ် ပြီး သာသာ ယာယာ အနားယူ ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ် တွေကို အင်စတာဂရမ် စာမျက်နှာ ကနေတဆင့် မျှ ဝေပေး ထားတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ပုရိသ‌တှေ ရငျအစုံ ကို လှုပျခတျ သှားစမေယျ့ အကွ မျးစား ပုံတှေ ထု တျပွလိုကျတဲ့ ရှအေိမျစညျ
one by one ထိုးမည် ဟူသော စကား နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်ရွန် ရဲ့ မန်နေဂျာ မအူပင်သား ကိုရဲနောင် ကို ဒဲ့ပြောပြီ